गठबन्धनलाई जिताउन जनता आतुर छन्
कृष्ण दाहाल, उमेदवार, मकवानपुर–१
२०७४ कार्तिक २८ मंगलबार १७:००:००
०४८ र ०५६ मा मकवानपुर–१ बाट निर्वाचित कृष्ण दाहाल अहिले सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा वाम गठबन्धनबाट उमेदवार बनेका छन् । विगतमा दुई पटक एमालेका तर्फबाट उमेदवार दाहाललाई लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले टक्कर दिँदैछन् ।
प्रस्तुत छ, स्थलगत रिपोर्टिङका लागि मकवानपुरको हेटौँडा पुगेका बाह्रखरीको टोलीले दाहालसँग गरेको कुराकानी–
निर्वाचनको माहोल कस्तो भइरहेको छ ?
निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको दुईवटा संयुक्त भेला एकरदुई दिनमा सम्पन्न गर्छौं । त्यसपछि हामी टोल बस्तीमा मझौता खालका कोणसभा र चुनावी भेला गर्दैछौं ।
विगतमा पनि तपाई जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो, बीचमा फेरि ग्याप भयो, तपाईंको कमव्याक किन ?
म २०५६ सालमा उमेदवार भएँ । ६४ र ७० मा उमेदवार भइनँ । मेरो क्रियाशील उमेर भएकाले देश र जनताको लागि केही दिनसक्छु भनेर फेरि उमेदवारी दिएको हुँ । मकवानपुरका स्थानीय कार्यकर्ता, जनता र नेता पनि मेरो कमव्याकको प्रतीक्षामा थिए ।
विगतमा तपाईंले के गर्नुभयो, अब के गर्नुहुन्छ ?
विगतमा राजतन्त्र भत्काउनु थियो । हिजो एमाले र माओवादीकै पनि फरक(फरक मत थियो । अब हामी एउटै भएका छौं र हाम्रो उद्देश्य पनि एउटै छ । हाम्रो अबको ध्यान लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्नेबाहेक अर्को कुनै छैन । जनताको अधिकारको लागि सडकमा जाने आन्दोलन सकिएको छ । हामीले विगतमा देखेको सपना पूरा गर्न नै अहिले वाम गठबन्धन बनेको हो ।
एमालेले विगतदेखि नै चुनाव जितेपनि मकवानपुरको लागि देखिने काम गरेन भन्ने गुनासाहरु आइरहेका छन् नि ?
एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धनबाट आत्तिएकाहरुले गर्ने तर्क हो यो । एमालेले गर्दा नै मकवानपुरका गल्लि(गल्लिमा बाटो पुगेको छ, विजुली पुगेको छ । विकट राई गाउँसम्म बाटो पुर्‍याउने पार्टी पनि एमाले नै हो । अब पनि हामी यस क्षेत्रको लागि काम गर्छौं । कसैले मकवानपुरमा ठूला कुरा नगरे हुन्छ । हामीले जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकेनौं बाधाहरु आए । यसपटक सम्पूर्ण बाधाहरु पार गरेर अब केवल समृद्धिमात्र गर्ने हो ।
ती कामहरु पूरा गर्ने समृद्धिको आधारहरु के/के छन् ?
अहिले तीन तहको सरकार रहेका छन् । हामी व्यक्तिगत रुपमा के गर्छौं, के गर्दैनौं भन्दा पनि पार्टीगत रुपमा नै विकासको केन्द्रबिन्दु गाउँ बनाउने योजना छ । अहिले जति बजेट छ गाउँपालिकाको, त्यसको दोब्बर बनाउने योजना छ । अहिले वृद्ध–वृद्धाहरुले जति भत्ता पाएका छन्, त्यसको दोब्बर हुनेछ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा अहिले जति कामहरु भइरहेका छन्, त्यो काम अब तीव्र गतिका साथ सम्पन्न हुन्छन् र गाउँ टोल बस्ती–बस्तीका विकास निर्माणका कामहरु अगाडि बढ्छ ।
हामीले जनताका आधारभूत कामहरुलाई पूरा गरेर यो राष्ट्रलाई अगाडि बढाउँछौं । २५ वर्षभित्र विश्वको शक्तिशाली मुलुक बनाउने हाम्रो योजना छ । त्यस्तैगरी १० वर्षभित्रमा यो मुलुकलाई मध्यम स्तरको विकासको तहमा पुर्‍याउने लक्ष्य किटान गरेर कार्यक्रमसहित हाम्रो गठबन्धन अगाडि बढेको छ । विगतको अनुभवले पनि हामीप्रति आशा र भरोसा गरेका छन् र आतुरतापूर्वक यो गठबन्धनलाई जिताउन जनताहरु पर्खेर बसिरहेका छन् ।
मकवानपुरका चेपाङ समुदायका मानिसहरु गाँजाका भरिया बनेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्, त्यस्ता समुदायहरुको उत्थानको लागि तपाईंहरुको भूमिका के रहन्छ ?
हो, चेपाङ समुदायमा गरिबी, अशिक्षा र चेतना कम छ । विगतका सरकारहरुले त्यस्ता समुदायहरुको निम्ति ठीक ढंगले काम गर्न सकेनन् । अब हामी नयाँ योजनाका साथ त्यस्ता समुदाय वा क्षेत्रहरुमा विकासका पूर्वाधारहरुको कामहरु लैजान्छौं । त्यहाँ पुरानो खेती प्रणालीलाई मुक्त गरेर आधुनिक खेती प्रणाली अगाडि बढाउने सोचमा हाम्रो गठबन्धन छ ।
हेटौंडालाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने योजना तपाईंहरुको प्रतिस्पर्धीको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साथीहरुले हेटौंडालाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने पहल गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन । उहाँहरुले कतै पहल गर्नु भएको भए पनि गर्नुहोला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
यहाँ एउटा चित्रेपानी अस्पताल खोल्नुभएको छ, त्यो पनि बिना योजना बनाइकाले भग्नावशेष अवस्थामा छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उमेदवारहरुले चुनावको बेलामा मुखले मात्र बोलेर हुँदैन । हामी कार्यक्रमसहित हेटौंडालाई प्रदेशको राजधानी बनाउने अभियानमा छौं । हेटौंडालाई फास्ट ट्रयाकसँग पनि जोडिँदै छ । निजगढ विमानस्थल पनि हाम्रो नजिकै भएकाले हेटौंडा प्रदेशको राजधानी बन्न सक्ने आधार रहेको छ । त्यसको लागि एमाले र माओवादीबीचको वाम गठबन्धनले चुनाव जित्नु आवश्यक छ ।
मकवानपुरमा बाटो बिस्तारसँगै मुआब्जा पाइने हो कि होइन भन्ने स्थानीयमा चिन्ता छ, यसमा एमालेको दृष्टीकोण के छ ?
बाटो बनाउनुपर्छ, त्यो सकारात्मक काम हो । तर, जनताको घर भत्काएर, सुकुम्बासी बनाएर बाटो बिस्तार गर्नुको अर्थ हुँदैन । बाटो बिस्तार हुँदा, विकास हुँदा जनता पनि सम्पन्न हुनु जरुरी छ ।
तर, यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा मकवानपुरको सुरक्षाको प्रोटेशक्सन वालको रुपमा बाइपास बनाउनु जरुरी छ । राप्तीको किरानै–किनार हुँदै अर्को बाइपास बनाएनौं भने खतरा हुन्छ । त्यसैले यो बाटोलाई पनि चौडा गर्दा बजारवाला घरवालाको सहमतिमा हामी गर्छौं । यो बाटो सहरलाई नै बाइपास हुने गरी बनाउने हाम्रो योजना छ । यो काममा हामी जितेको भोलिपल्टदेखि लाग्छौं । यहाँ बस्ने मान्छेहरु कोही पनि आतंकमा पर्नुपर्दैन ।
वाम गठबन्धन बनेपछि मकवानपुरमा एमाले र माओवादीको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ, पार्टी नै एकता होला त ?
असोज १७ गते राष्ट्रिय सभागृहबाट एमाले र माओवादीबीच जुन खालको एउटा चुनावी गठबन्धनसँगै पार्टी एकता गर्ने निर्णय गर्‍यो, त्यसले आम मकवानपुरबासीमा खुसी छाएको छ । हिजो एकआपसमा झगडा गर्ने एमाले र माओवादी कार्यकर्ताबीच एकखालको मित्रताको भावना पैदा हुँदै गएको छ ।
त्यसले गर्दा यो गठबन्धनप्रति मकवानपुरमा रहेको एमाले र माओवादी कार्यकर्ता एकदमै खुशी छन् । यो पार्टी एकताको बलियो आधार पनि हो । हाम्रो यो गठबन्धन कुनै स्वार्थ र सत्ता प्राप्तिको लागि मात्र होइन । मुलुकलाई समृद्ध र स्थिर सरकारको लागि हो । पार्टी एकता हुनेमा हामी ढुक्क छौं ।
मकवानपुरमा वाम गठबन्धनले कति वटा सिट जित्ला ?
वाम गठबन्धनले मकवानपुरमा ६ वटै सिट जित्छ। र, निकै ठूलो अन्तरले लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उमेदवारहरुलाई पछाडि पार्छौं । यहाँ लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साथीहरु नै एकआपसमा मिल्न सक्नु भएको छैन । जसले गर्दा लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई जाने मत हामीलाई आउने प्रचुर मात्रामा सम्भावना छ ।